novembre 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 30 novembre 2020 11 décembre 2020
Ivom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala
Alahadin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Solofo RAKOTOSEHENO no nitarika ny litorjia. ANDRIANILAINA Six, Loholona no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana.
Hieno ny Toritreny
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 98:1-4.
Noredonina ny hira FFPM 16 : 1-2 “ AVIA, RY VAZAN-TANY O! ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.
ANDRIAMBELOSON Tiffany, mpampianatra ao amin’ny K8 no nitarika izany. Nanao vavaka avy hatrany ny mampampianatra ho fangatahana ny Fanahy Masina
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia hoe : » Mifankazara amin’I Tsitoha ianao dia hiadana” Job 22:21a .
Tantaran’i Martha sy Maria no nentina nanaovana fanoharana teto. Raha nandray vahiny i Martha nisy fotoana dia variana nanao raharaha izy ary i Maria kosa dia nihaino amin’i Jesoa.
Isika ihany koa dia tokony anao izany, mihaino an’ i Jesoa amin’ny alalan’ny famakiana ny baiboly sy fihainoana ny tenin’Andriamanitra.
Natsangana ny ankizy sy tanora ka naverina novakiana ny JOB 22:21 a ary natao ny hira ny FFPM 808: 2 “ EO AN-TRATRANAO JESOSY ”.
. Nanaraka ny fotoanan’ny Sekoly Alahady ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 210: 1 « ZAVA-TSOA TOKOA NY FITSIPAKAO ». ZANAHARITSIMBA Toky no nanatanteraka ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.
Namaky ny Testamenta Taloha SAL 130 : 1 – 8 kosa RAKOTONDRAMBOA Andry
Namaky ny Testamenta Vaovao LIO 12 : 35 – 40 ; TIT 2 : 11 – 15 kosa RAOLIARIZAKA Bakoly
Natao ny hira FFPM 190 : 1-2 ” RY FANAHY MPANAZAVA “ mialoha ny toriteny.
» Miandrandra famonjena ny mino » io no tena fanolorana nentina nitondra ny toriteny.
Nahoana no miandrandra izany ny mino, satria voageja izy (fiaraha-monina feno herisetra sy habibiana). Ny vahaolana amin’izany nefa dia ny Baiboly ihany.
Ny fandinihana ny Baiboly no ahitantsika ny valin’ny olana rehetra mianjady amintsika, ao avokoa no ahitana ny vokatry ny fikarohana rehetra ary porofon’izany no hanambaràna fa ny boky siantifika feno sy malaza indrindra ankehitriny dia ny baiboly amin’ny alalan’ny Genesisy (famoronana an’izao tontolo izao)
Ny teny hoe miandrandra dia mifono hevitra roa dia :
1) Miandrandra mijery ny lanitra
2)Miandrandra amin’ny lafiny tsy hita maso
Io heviny faharoa io no sahaza antsika Kristianina dia ny miandrandra ny famonjena, satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra velona.
Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa.
Rehefa vita izany dia nanao ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.
Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain’i RALAIARIMANANA Narindra.
Publié le 2 novembre 2020 24 novembre 2020
01 Novambra 2020
ALAHADY 01 NOVAMBRA 2020
" Miandrandra famonjena ny mino"
Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no tanterina amintsika izao. Raharijaona Solofonirina Mpitandrina eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe Famonjena no nitarika ny fotoana sy nitondra ny hafatry ny Tompo ary Ramatoa Raharijaona Bodo no nanatanteraka ny vavaka sy nanao ny vakiteny.
Ny Matio 9:29b no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.
Fotoana miavaka ny androany Alahady 01 novambra 2020 satria fotoana natokana handraisana ireo katekomena andiany MIJORO. Ary ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Novambra izao dia ny hoe » Miandrandra famonjena ny mino ».
Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 33:18-22« Indro ny mason’I Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindrampony. Mba hanafaka ny fanahiny amin’ny fahafatesana sy hamelona azy, raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an’i Jehovah. Famonjena antsika sy ampingatsiaka Izy. Fa izy no ifalian’ny fontsika. Satria ny anarany masina no itokiantsika. Jehovah ô, aoka ny famindramponao hitoetra aminay. Araka ny anantenanay Anao”.
Nohiraina ny hira FFPM 167:1-3 « Tompo o! Mba te hihaona ». Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny vavaka sy famakiana ny teny Soratra Masina.
Araka ny Perikopa androany dia nanao ny vavaka sy vakiteny tao amin’ny Genesisy 32:4-13 – Matio 9: 27-31 ; Asa 16 : 6-10 Ramatoa Raharijaona Bodo.
Taorian’izay dia nohiraina ny hira FFPM 226 “Tompo o! Mba te hihaona”
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.Ny andinin-tsoratra masina nangalana ny hafatra dia ao amin’ny bokin’ny Matio 9:29b: Tongava aminareo araka ny finoanareo”.
Ny lohahevitra hifampitaizana mandritra ity vola vaovao ity dia ny hoe : Miandrandra famonjena ny mino”. Ary ny hafatra hasongadina ato amin’ny andinin-tsoratra masina dia ny fanehoany Jesoa ny fahagagana sy famantarana maro anehoany ny maha Mesia Azy. Manomboka eo amin’ny Matio faha 8 ka hatramin’ny faha 9 dia im-polo no nanehoan’i Jesoa Kristy ny fahagagana sy fahamantarana ny maha Mesia azy. Ao ny fanasitranana ary eo ihany koa ny fahagagana lehibe izay nataony samihafa.
Nanomboka teo dia niely ny lazan’I Tompo.
Ka na ireto jamba roa lahy ireto azy izay niandrandra famonjena, rehefa nandre izy fa nandalo ny Tompo, iny Jesoa, dia nihorakoraka ny olona ary fantany fa nandalo eo aminy tokoa Jesoa dia mba nanao antso izy mirahalahy. Ary rehefa nahita azy Jesoa ka nizaha toetra ny finoany dia nambarany fa tena manana finoana tokoa izy roa lahy.
Tsy niteny na inona na inona Jesoa ka rehefa izany dia niditra tao antranony izy roa lahy. Ary izy roa lahy niandrandra amin’ny finoana izay atao hoe famonjena. Ary nanaraka sady niditra tao amin’ny trano izay nidirany Tompo ihany koa izy roa lahy. Ka nahatonga ny Tompo niteny hoe : Tongava aminareo araka ny finoanareo.
Asehony Tompo amin’ny perikopa eto fa azahoana valim-pangatahana atao ny finoana izay ananantsika. Jesoa miteny matetika fa “Na inona na inona angatahinareo ka ataonareo amin’ny finoana dia ho azonareo amin’ny finoana izany.”
1- Aseho eto ny kalitaon’ny finoana an’Andriamanitra (qualité).
Misy tokoa ve ny kalitao ny finoana?
Ary ny kalitaon’ny finoana eto dia hita ary andrasana. Ary izay no ahazoana ny valiny fangatahana izay ataony.
Manao ahoana ary ny kalitao finoana. Araka ny voalaza dia Izy miaralahy jamba dia efa nangataka tamin’ny Jesoa teny an-dalana, ary ny faharoa dia efa nanontany ihany koa Jesoa hoe manana finoana ve ianareo ary mino ve ianaoreo fa mahavita izany Aho. Dia efa nanaiky izy roa lahy ary izy ireo nitsofoka tao antrano mbola naneho izany fagatahana izany
Zavatra roa no miseho amin’izany :
– Haingana dia mivaly ny fangatahana sy ny vavaka izay atao.
– Maharitra eo amin’ny fiainana fa tsy mandalo na miserana ihany.
Hitany Jesoa teo tamin’ny fiainan’ireo jamba izany ka nahatonga Azy nilaza hoe mandehana araka ny finoanareo dia nahiratra izy ireo satria nokitihany Jesoa ny masony.
Izany no andrasany tompo amintsika. Ary hitenenany mandrakariva fa raha miandrandra famonjena isika, dia afaka manome araka ny kalitaon’ny finoantsika Izy.
Izay no angalatsika lesona, misy mantsy ny atao hoe Jakobisme. Avy amin’ny teny Hebreo Jakoba. Ny dikany eto dia hafetsifetsena hahatafavoaka gorobaka. Amin’ny hafetsifestena, i Jakoba dia izany mihintsy. Noteneny Jesoa izy hoe mandeha mody any amin’ny tanindrazanao misy anao. Fantany tsara ny hatezerany rahalahiny Esao sy ny fahatahorany fa hamono azy ny rahalahiny.
Inona no nataony :
– Lasa izy naniraka olona hiresaka amin’ny Esao izany hoe hitondra dinidinika diplomatika.
Manetry tena diplomatika izy satria nolazainy fa ny tompo dia ny rahalahiny ary izy no mpanompo izay tsy fomba teo amin’ny Hebreo izany.
– Ny hevitra faharoa hitany dia mbola nitondra olona 400 Esao. Nieritrerita izy fa ho potika indray. Ka andeha ho zaraiko roa ny antoko, dia rehefa enjehina iry dia mitsoaka ireto.
Mbola tafavoaka gorobaka amin’ny hafetsena ihany Jakoba. Rehefa niverina tamin’ny finoana ny amin’ny tenin’i Jehovah izy dia nifamihina sy mifampiarahabana tamin’ny Esao indray.
20 taona no nisarahany izy mirahalahy. mbola tsy levona ihany anefa ny Jakobisme. Fa eto amin’ity fotoana farany izay nentiny taloha ity rehefa miverina amin’ny finoana misy kalitao amin’ny nandrasan’I Tompo. (Gen 32-33) dia miravona ny zava-drehetra, haingana ny valiny ary maharitra izany.
Izaho sy ianao ihany koa dia manana andraikitra sy adidy, ny fiangonana, ny fiaraha-monina , ny firenena, dia manana an’ity finoana ity, ka ny kalitao andrasan’I Tompo amintsika dia hitaona izany ary miandrandra famonjena, fa ho haingana ny valimbavaka. Haharitra eo amin’ny fiainana fa tsy miserana fotsiny.
Ho antsika manana fotoana manokana hahatsiarovana Jobily, fankalazana an’Andriamanitra, nisy ny areti-mandoza manerana izao tontolo izao ary Madagasikara, nisy tsy nahavita na inona na inona, misy ihany koa ny zavatra mampalahelo, ankoatra izany misy mpitandrina hisotro ronono amin’ity taona ity, tsy misy hetsika azo atao kanefa Pasitera handeha retraite amin’ny volana desambra, afaka iray volana nefa niaraka amam-polo taonany tamin’ireto fiangonana ireto
Manàna finoana misy kalitao izay azo heverina fa hitondra fahombiazana.
Ho an’ny Katekomena, raha tena miandrandra famonjena amin’ny Tompo ka tena andiany MIJORO, ny hira “Tsy mana-tahotra” ny finoantsika fa ny tahotra tsy misy fitiavana, ary raha tsy misy fitiavana tsy misy handrandraina amin’ny Tompo akory. Ny finoana dia tokony tsy misy tahotra satria izany no fahavoazana nahatonga an’I Adama niafina tao amin’ny saha Edena. Voaraoka tao aminy saha edena adama. Izaho sy ianao mety ho tratra izany koa.
Eto asehony Tompo fa misy kalitao izany finoana izany. Heveriny Tompo izany fa tokony hananana. Raisina eo amin’ny vavaka sy hataka, izay ataonao, ny matoky an’Andriamanitra dia matoky ny teniny, dia izay ihany.
Rehefa izay dia tsy tahaka any Jakoba izany fa omen’I Tompo maimam-poana ary hanigana sy maharitra izany fahasoavana atolotry ny tompo.
2- Mifamatra amin’ny finoanao ny vokatra azonao, ny valiny omeny tompo aminao (quantité)
Izay no nahatonga ny Tompo hilaza hoe “Tongava aminareo..”. Raha kely ny finoana adia kely koa ny quantité.
Eto dia mety hiteny hanakampo hoe, aiza kosa e! fa ny Tompo ve tsy mahalala izay omena ahy? Ahoana ary ny fatrany ny fionana no tsy atao mitovy amin’izay eritretreretinao izany.
– Asehony Tompo fa rehefa nangataka izy roa lahy dia noheveriny fa mahavita izany ny Tompo. Hoy izy y roalahy “Eny tompoko”. Eo no ahitana ny fatrany finoan’izy roa lahy. Ary nahatongava izany valim-bavaka izany ary nandraisany fitahiana niatrehany any Jesoa izany. Raha ny fatra dia tanteraka araka izay iriany zavatra ho azonao. Araka ny fatrany finoanao. Indraindray misy olona mieritreritra raha omeny Tompo an’izao aho dia ahoana re?.
Raha ny fatrany finoana dia tanteraka araka izay irinao ny zavatra ho azonao araka ny fatrany ny finoana.
Ny faniriana ngezabe, kanefa ny finoana kely. Raha ny fatrany finoana no refesina, izay no mahatonga ny tsy azontsika. Misy miteny hoe otran’ny manaloka ahy ity tendrombohitra ity isa-maraina, tsy misy masoandro miditra.
Ny Tompo miteny hoe :”Na dia manampinoana aza ianareo ka na dia kely noho ny voatsinampy atsingidino any andranomasina any io andeha any. Tonga ny maraina mbola teo ihany ny tendrombohitra. Efa nampoiziko fa tsy hiala eo io, ahoana moa no ahafahako manozona io tendrembohitra io hitsingidina ary. Fatrany ny finoana, tsy tanteraka satria tsy nisy finoana.
Tanteraka araka izay irinao izay anagatahinao ka omen’I Tompo anao.
– Sahaza ny hetahetanao ny ataony Tompo aminao amin’izany valim-bavaka atolony izany. Mety sy tsy mety mendrika eo anatrehan’ny vavaka ataonao.
Misy ny olona mahazo valim-bavaka fa tsy sahaza satria tsy tao amin’izany niriany. Misaora ny Tompo. Misy ihany koa olona mahazo fa tsy sahaza, tsy mankasitraka ary tsy misaotra , satria tsy ao amin’izay ilainy ary tsy mifanaraka, tsy ao amin’ilay iriny. Diso fangataka, ary ny fatrany finoana tsy mifanaraka aminy zavatra angatahina akory.
Na ny Apostoly aza mba niharan’izany koa (Asa 16). Nieritreritra I Paoly fa isaky ny mande izy ao anatiny vavaka ataony dia sakany Fanahy Masina, farany dia nipetraka ary nahita fahitana. Ny dikany aza mihetsiketsika fa miandrasa sy miandry ny asan’Andriamanitra tiany hitondrany anao ka ampiasany anao. Tena Makedonia izany no tokony handehanana.
Ho antsika izay miharitra fahorianan,tahotra, fahasahiranana, ary mba te ho tafavoaka amin’izany, aoka ny fatrany finoantsika tahaka izay ataontsika ary raha mangataka dia ataovy sahala amin’ny fatrany finoana izany. Io fahasahiranana mahavery hevitra io dia hainy Tompo ny mamaha ny fahasahiranana izany. Rehefa sahy ny mitondra izany eo anatrehan’I Tompo, na dia fiainantsika manokana dia hitantsika ny valimbavaka.
Amin’izao vanim-potona iainantsika izao, misy ny very asa, ento eo anatrehany Tompo,fa ny Tompo mahay mamaly araka ny habeny indrafo sy araka ny fatrany finoanao.
Toy izany ny katekomena andiany MIJORO, sao tratra izany koa isika, maro ny mbola masiaka lavitra noho izay nolalovanao tamin’ny fiofanana, ny fakam-panahy aorian’ny fandraisana fanasan’ny tompo. Maninona ranona mpivavaka tsara lasa mpandray fanasany tompo tsy hita mihitsy, ny olona mpiofana , mpiomana nandritra ny fiofanana rehefa lasa mpandray dia lasa mangatsiaka ary tsy hita aoriany fandraisana azy. Lasa fialan-tsiny sy fakampanahy tsy andehanana mivavaka ny fihibohana na dia tsy marefo aza.
Misy Diakona, tsy mipoitra mihitsy, misy Loholona, ary misy Mpiandry.tratra izany koa. Mafy io ary mila resena. Miandrandra famonjena, arakaraky ny fihatsaran’ny kalitao ny finoana ary rehefa mihatsaratsara ny kalitao ary mitobo hatrany hatrany ny fatrany finoana. Ianareo 43 mianadahy rehefa tonga ny fotoana no ho Diakona rahampitso.
Izaho sy ianao mpandray ny fanasan’ny Tompo, Diakona, Loholona, Mpiandry, Tompon’andraikitra ao amin’ny sampana, isika mpiara-mivavaka, miteny aminao isan’ndro ny Tompo; fiandrandratsika famonjena “Tongava aminareo arak any finoanareo”.
Taorian’ny feon-javamaneno sy ny vavaka fifonana izay narahana ny fanekem-pinoana kristianina sy ny vavaka mangina dia noredonina ny hira FF 2:1-4 “He manolo-tena”.
Nisy feon-javamaneno fohy, novakiana ny raharam-piangonana.
Novakiana ny andinin-tsoratra masina Salamo 40:16 no nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :
• Alahady ny reformasionona anio
• Nohamafisina ny fepetra ara-pahasalamana eto amin’ny fitandremana
• Foibe FJKM :
o Fitondrana aam-bavaka sy fanampina ny mpiray tanindrazana, noho ny fisian’ny kere any amin’ny faritra atsimo ny nosy. Aterina ao amin’ny foibe ny fanomezana atolotra amin’izany
o Asabotsy 19 desambra : Fambolen-kazo izay atao any Ambatolampy
o Hitondra am-bavaka ny fiomanana synoda lehibe
• Asabotsy 07 novambra : fanasana noho ny fankalazana ny faha 130 taona FJKM Ambohitrinibe Fahazavana sy fitokanana ny akany fahazavana amin’ny 09ora sy sasany
• Nisy ny fiarahana mandray ny fanasany tompo ho an’ny rehetra manatrika ny fanompoam-pivavahana sy ny Rakitra tsingeritaona teraka volana oktobra
• Alatsinainy 02 novambra : hitondrana am-bavaka ny asan’ny Gazety Taratry ny famonjena sy ny Rantsana Fanantenana sy Fialamboly iarahana amin’ny AFF amin’ny 06ora hariva
• Asabotsy 07 novambra : maraim-baovao arahana ny fotoanany RFF
• Alahady 08 novambra : alahadim-bokatry ny Gazety taratry ny famonjena sy ny RFF
• Alahady 15 novambra : alahadim-bokatry ny SAMPATI
• Alahady 29 novambra : alahady ny Zanaka ampielezana sady fanombohana iray volan’ny voka-dehibe eto amin’ny fitandremana
• Toetry ny vola :
o Rakitra 1: 576 500 Ar
o Rakitra 2 sy fiaraha miasa amin’ny Fifohazana : 622 600 Ar
o Valopy vokatry ny fifohazana : 533 000 Ar
o Raki-pisaorana sy voady :60 000 Ar
o Adidy : 910 000
 Totaly : 2 702 100 Ar
• Fiantsoana Fanambadiana :
o Ramaniraka Nomena Arisaotra Lala sy Randriamihaja Malalatiana – Zoma 20 novambra amin’ny 10 ora – FJKM Amparibe Famonjena
o Andriamorasata Anja Nambinina sy Andrianary Ravaka.Malalatiana – Asabotsy 21 novambra amin’ny 09h30 – FJKM Ambatomena
o Gazety taratry ny famonjena sy ny tranok’ala :
 Efa nivoaka ny gazety volana novambra
 Alatsinainy 02 novambra : amin’ny 06 ora hariva iarahana amin’ny AFF
 Asabotsy 07 novambra : fivoriany komity – AG – fanavaozana tompon’andraikitra – fiaraha miala hetaheta
 Alahady 08 novambra amin’ny 10 ora: fotoambavaka tarihan’ny sampana
o Laika :
 Asabotsy 07 novambra : AG faharoa amin’ny 02ora sy sasany, ho fanomanana dia antsoina ny komity hivory ny alatsinainy amin’ny 05 ora sy sasany eto amin’ny fiangonana
o Dorkasy : misy ny asa sy fampaherezana iarahana amin’ny sampana fifohazana ny Talata amin’ny 02ora
o Sekoly alahady : Asabotsy 14 novambra :
 fivoriany komity rehetra amin’ny 02ora sy sasany
 aorian’izay dia antsoina ny Mpikambana rehetra – Mpianatra K7 no miakatra – Mpampianatra – Ray amandreny sy ny sakaizan’ny sekoly alahady hanatrika ny AG
o vaomieran’ny vola :
 talata 04 novambra : antsoina ny mpikambana – diakona – loholona – solontena sampana amin’ny 06 ora hariva
 alahady 08 novambra : farany fanaterana fiche technique ao amin’ny vaomiera ny vola. miaraka amin’ny adiresy mailaka
• Fisaorana avy amin’ny katekomena MIJORO : Mpitandrina mivady, Mpitandrina mianadraharana, mpampianatra rehetra, fiangonana manontolo ary nanolotra veram-pandraisana sy écran plat
Taorian’ny famakiana ny andinin-tsoratra masina ho an’ireo nahatratra ny tsingeritaona , Hebreo 13:5b “Izaho tsy handao anao mihintsy na hahafoy anao akory”, dia nanao ny fanatitra teny amin’ny alitara izy ireo.
Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira Antema 5 “ Indro ny aron’ny mandanao” – FFPM 471 “ He sambatra aho Jeso” – HF 12 “Feno Toky”
Ny FFPM 441:3 « Raiso ny fahaizako» no nohiraina ho fanolorana ny fanatitra.
Taorian’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, dia nanao ny hirany ny Hasin’ny Famonjena.
FANDRAISANA IREO KATEKOMENA
Noredonina ny hira FFPM 446 “Atolotro Anao ny tenako, Ry Raiko” ary niroso tamin’ny fanokanana ireo katekomena “MIJORO” ho mpandray fanasan’ny Tompo.
Taorian’ny fanokanana sy ny vavaka dia nohirain’ireo Katekomena vaovao ny hira “Tsy mana-tahotra ny fitiavana”.
Nohiraina ny FFPM 753:1-3 “Tiako ny miaraka aminao ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 625 :5 « Ry Jeso tsy miova » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno.
Hira FFPM 417 : 1-2
Hira FFPM 109:1-3
Hira FFPM 262 : 1-2-3
Hira FFPM 107:1-2-3
Raki-pisaorana HF : 29
Hafatra sy tso-drano
• Fafana : Raharijaona Rasetamanana Solofonirina
• Fanamafisam-peo:Randriamahefa Tinarivony
• Mpitendry orgue: Irimanana Eninkaja
• Naka ny sary: Rabemananoro Jonathan
• Nandray an-tsoratra:Raoliarizaka Bakoly